Sports Archives - Kantarawaddy Times
လွိုင်ကော်အား/ကာသိပ္ပံကျောင်းမှ ASEAN school games လက်ရွေးစင် ၃ဦးရှိ
Kantarawaddy Times August 19, 2019
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ(လွိုင်ကော်)ကျောင်းမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အားကစားနှင့် ပညာရည်ထူးချွန်သူများ အနေဖြင့် ASEAN School Game လက်ရွေးစင် ၃ဦး ရှိသည်ဟု ၎င်းကျောင်းမှ ဘောလုံးအမျိုးသားနည်းပြ ကိုအောင်ကျော်ဦးက ပြောပါသည်။ “ကျနော်တို့ကျောင်းက အခုလက်ရှိ School Game လက်ရွေးစင် ရွေးခြယ်ခံရတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင် မလွီးဇာရှိမယ်၊ မောင်စိုးမင်းသူရှိမယ်၊ မအယ်ခရီးဖောရှိမယ်။ ဒီအတိုင်း ဘော်လုံးဆိုရင် အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ရွေးချယ်ခံရသူရှိတယ်။ မမေရီဦး၊ မကြယ်လူစင်၊ လူဆီးယာသုံးယောက်ဖြစ်တယ်။” ဟု ကိုအောင်ကျော်ဦးက ပြောပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အားကစားနှင့် ပညာရည်ထူးချွန်သူများအနေဖြင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မှ မလွီးဇာသည် ငွေတံဆိပ်ဆုကို ပြေးခုန်ပစ်အားကစားနည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မှ မအယ်ခရီးဖောသည် ဂုဏ်ပြုဆိုကို […]
ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင်း ဘော်လုံးအားကစားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လူငယ်များ မျှော်လင့်
Kantarawaddy Times December 24, 2018
ခွန်းကလိုင်းဖရီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင်း အလယ်ကယန်း၊ သိကျိတ်နှင့်ကယောကျေးရွာအုပ်စုတို့မှ ဘော်လုံးအားကစားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လူငယ်များ မျှော်လင့်နေကြသည်။ အလယ်ကယန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆီးဘူးကျေးရွာနေ လူငယ်ကစားသမား ခွန်းအားပိုက “ဒီမှာက အားကစားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာက အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး။ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါဖိတ်ခေါ်ဖလား၊ ရပ်ကွက်ဖလားတို့ ဖွင့်မှပဲ ကျွန်တော်တို့ ကစားရတာပါ။ ကစားပြီးလည်း ကစားသမားတွေက တခြားသောနေရာမှာ ထပ်ကစားဖို့ အခွင့်အလမ်းက မတွေ့ရဘူး။” ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးရခြင်းသည် ၎င်းတို့ဒေသရှိ ထူးချွန်သည့် လူငယ်ကစားသမားများကို မြို့နယ်အဆင့် ကစားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် ဌာနဆိုင်ရာ၊ အသင်းအဖွဲ့၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ မရှိခြင်းကြောင့်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ဘော်လုံးအားကစားကို လိုက်စားသည့် လူငယ်အများအပြားရှိသော်လည်း ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်မှ […]
ဖယ်​ခုံမြို့က ဂိုးသွင်းချန်ပီယံ ရိုဘင်တိုင်စန်
Kantarawaddy Times September 9, 2018
မူဂျာမီလှိုင် ရေးသားသည်။ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ နမ့်ပေါ်လုံရွာသား ခွန်းရိုဘင်တိုင်စန်ဟာ ကျောင်းတက်တဖက်နဲ့ နေရှင်နယ်လိဂ်အဆင့်၊ ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ဘောလုံးကန်ခွင့်ရနေတဲ့ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် MNL(မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်)ပြိုင်ပွဲရဲ့ သွင်းဂိုးတွေဟာ သူကစားလာခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ရာသီလို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းက ရိုဘင်တိုင်စန်၊ ရိုဘင်၊ မိုက် စတဲ့နာမည်တွေ ခေါ်ကြပါတယ်။ ရိုဘင်ရဲ့ မိဘတွေဟာ တောင်ယာအလုပ်တွေကို ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ ကယန်းလူမျိုး တောင်သူလယ်သမားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးချင်း ၅ ယောက်ထဲမှာမှ ရိုဘင်ဟာ ဒုတိယမြောက်သားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဘင်ဟာ ၁ဝ တန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ဆက်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် တောင်ကြီးကိုသွားပြီး လေ့ကျင့်ရေးဆင်းခဲ့ပါတယ်။ မြို့ကြီးပြကြီးရှိ လေ့ကျင့်ကွင်းတွေထဲဝင်ရင် ငွေကြေးပေးပြီးဝင်ရတဲ့အတွက် […]
“ရှေ့ဆက် ညီမငယ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းခေါ်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။”-ကယန်းလက်ဝှေ့မယ် အန်တိုနီယာ
Kantarawaddy Times July 20, 2018
မူအက်စတာ ရေးသားသည်။ “ရှေ့ဆက်ညီမငယ်တွေ ဝါသနာပါရင်လည်း ကျွန်မကလက်ဆင့်ကမ်းခေါ်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် နေရာတစ်ခုကိုရသွားပြီဆိုရင် ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဒီပညာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်း ပြန်share ပေးမယ်၊ လက်တွဲခေါ်ပေးမယ်။ သူတို့ဘက်ကသာ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိရင် ကျွန်မဘက်ကတော့ လက်မနှေးပါဘူး၊”လို့ ဆိုလာသူက ကယန်းလက်ဝှေ့မယ်ဖြစ်တဲ့ အန်တိုနီယာပါ။ လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ နေရာယူနေတဲ့ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသူလေး အန်တိုနီယာ(Antonia)ဟာ နိုင်ငံခြားပွဲစဉ်တွေအတွက် ပြင်ဆင်လို့နေပါပြီ။ အန်တိုနီယာဟာ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ နာနတ်တောရပ်ကွက်မှာ ကယန်းမိဘနှစ်ပါးကနေ မွေးလာပြီး မွေးချင်းငါးဦးအနက် အငယ်ဆုံးသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို သုံးလသာတက်ရောက်ပြီး ကျောင်းပြေးခဲ့သူပါ။ ငယ်စဉ်က အဆိုဝါသနာပါသူ တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် လက်ဝှေ့နည်းပြဆရာက ခေါ်၍ အားကစားဘက်မှာ ပါသွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်၂ဝကျော်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ […]
Kantarawaddy Times March 24, 2015
Ut dictum ligula nisi, at mollis mi sagittis eu. Fusce vitae turpis placerat magna pellentesque pharetra vel et enim. Phasellus aliquam id metusaluctus. Etiam euismod enim id imperdiet dictum. Aenean porttitor ex eu velit mattis, id tempus leo blandit. Nullam rutrum congue magna quis scelerisque. Fusce venenatis ante […]
Proin convallis tincidunt erat, nec ornare lectus ornare sollicitudin. Cras in vehicula metus. Sed eget volutpat enim. Vestibulum non congue nisi. Donec consectetur urna accumsan mattis hendrerit. In posuere magna ut dui sagittis, pretium pharetra tortor lobortis. Maecenas malesuada lacinia lorem nec fringilla. Quisque id ullamcorper augue. Phasellus laoreet, ex […]
Etiam varius nulla sed luctus venenatis. Donec scelerisque leo sit amet velit convallis blandit. Nullam ultrices orci ac turpis volutpat gravida. Proin pharetra nisi at ligula venenatis, sed congue velit malesuada. Phasellus placerat, leo non gravida luctus, lorem magna porttitor lacus, non pellentesque mauris magna ut velit. Curabitur urna lacus, […]
Kantarawaddy Times March 20, 2015
Sweet roll danish tart danish. Wafer gummies chupa chups soufflé macaroon soufflé cupcake sweet. Danish chocolate sweet roll gummies liquorice pie cookie. Gummies biscuit oat cake dragée biscuit icing toffee. Pastry powder sweet cake pastry macaroon. Liquorice tootsie roll jelly beans. Bear claw tootsie roll liquorice sesame snaps gummies muffin […]